merolagani - सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बैंकहरुको बीग मर्जरको उच्चारण होला ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बैंकहरुको बीग मर्जरको उच्चारण होला ?
बैंकहरुले चुक्तापूँजी आठ अर्व पुर्याएको एक बर्षपनि नवित्दै फेरि बैंकहरुविचको बिग मर्जरको चर्चा चलेको छ । बिग मर्जरको चर्चा स्वयं बैकहरु,सरकार या राष्ट्रबैक कसले चलाएको हो एकीन नभएपनि सार्वजनिक कार्यक्रममा मर्जरको चर्चा भइनै रहेको छ ।
एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा स्वयंले बाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी ३४ अर्व पुर्याउनु पर्ने भन्ने अभिव्यक्ति राखेपछि बिग मर्जरको चर्चा कतै सरकारी तवरबाटै आएको त होइन भन्न थालिएको छ ।
यदि सरकारले सो को तयारी नै गरेको भए बैसाख २० गते आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहीं नै कहीं बिग मर्जरको बाक्य राखिन सक्छ । नेपालको ठूला परियोजनाहरुमा रकम जुटाउन भइरहेका बैंकको हैसियत नपुग्ने भएकोले कमसेकम ३० अर्व माथिका बैकका आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक बर्ष २०७२/७३को मौद्रिक नीति मार्फत २ अर्वको चुक्तापूँजीलाई बढाएर ८ अर्व पारिएको थियो । बैंकहरुलाई तोकिएको अर्थात ४ गुणा चुक्तापूँजी बृद्धि गर्ने समय ०७४ को पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो ।
चुक्तापूँजी ८ अर्व पुर्याएको जम्मा १६ महिनामात्र हुँदैछ । पूँजी चार गुणा बढाएपनि सो अनुसारको कमाई गर्न बैकहरुले सकिरहेका छैनन् । फोर्स मर्जर नगरी उदार तरिकाले पूँजीबृद्धि गरिदा प्राय सबै बैंकहरुले सो समयमा हकप्रद सेयर बेचेका थिए ।
हकप्रद जारी हुँदा उर्लेको सेयर बजार हकप्रद शेयर सूचीकृत भएर आएपछि नराम्ररी घटेको थियो । बजारका सेयरको अत्याधिक माग हुँदा सो अनुसारको आपूर्ति हुन सकेन । हकप्रदको मारले शेयर लगानीकर्ता हतप्रद भए । बैकहरुको पूँजीबृद्धिपछिका बर्षहरुमा शेयर बजारले लय नसमाउनुमा हकप्रद मुख्य कारण हो भनेर बिश्लेषकहरुले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
अहिलेको मर्जर चर्चामा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रतिकृया आएका छन । बैकर्सहरु नै मतैक्य छैनन् । नेपाल बैकर्स एशोसियसनले औपचारिक धारणा राखेको छैन । सायद कुनै निकायबाट औपाचारिक प्रस्ताव नआएर होला । तर अध्यक्ष ढुंगानाले मर्जर सकारात्मक भएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
मर्जरमा जाने कम्पनीको स्वाप रेसियो निर्धारण र कर्मचारी व्यवस्थापन वाहेक मर्जर प्रकृयाममा समष्या देखिदैन । बेलामा बेलामा मर्जरमा जाने भनेर अन्तिम छलफल गरेका बैंकहरुले अन्त्यमा जान नसकिने भनेर पछि हटेका छन् ।
पछि हट्नुमा स्वाप रेसियो, कर्मचारी व्यवस्थापन नै मुख्य हो । एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैकले पनि लामो समय छलफलमा बिताएर अन्त्यमा आएर रद्द गरेका छन् ।। यस्तै प्राइम बैंकले ओमलाई खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि लामो समयपछि तुहियो ।
राष्ट्रबैकले फोर्स मर्जरमा जान नसक्ने बताउँदै आएको छ तर बर्तमान अर्थमन्त्री फोर्स मर्जरका हिमायती हुन् । यो बिषयमा अर्थमन्त्री खतिवडा र गर्भनर चिरन्जीवि नेपालको बिगत देखिनै राय बाझिन्छ । अहिले पनि राष्टबैक बैक व्यवस्थापन विवेक प्रयोग गरी बैकहरु मर्जरमा जाउन भन्ने चाहन्छ ।
बिशेष गरी सरकारलाई नै बित्तिय क्षेत्रमा म्यानुपुलेट गर्नसक्ने हैसियत राख्ने ठूला बैक मर्जरका पक्षमा छैनन् । प्राय घरानिया बैकहरु मर्जरमा जाँदा आफनो हैसियत खस्केको ठान्छन् । तुलनात्मक रुपले कमजोर, सूचकहरुमा खासै सुधार गर्न नसकेका बैकहरु मर्जरमा जान चाहन्छन् । तर मर्जरमा जाँदा उनीहरु छुटै छुटै चाहन्छन् । सिभिल बैंकका सन्चालक इच्छाराज तामाडले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन्, बैंकहरु मर्जरमा जान लालायित छन् तर गाभिन जाने बैंकहरुलाई कर छुटको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
जनस्तरमा पनि बैंकहरुको संख्या बढि भयो भन्ने नै छ । तर आठ अर्व पूँजी पुगेको दुई बर्ष नबित्दै किन फेरि मर्जर भनेर भन्नेहरु पनि देखिएका छन् । बैकर्स अनील शाहले आठ अर्व पूँजी पुर्याउनुको औचित्य के थियो ? र फेरि किन मर्जरको आवश्यक्ता देखियो भन्ने प्रश्न बहसकै क्रममा औंल्याएका छन । मर्जर मुलुकको हीतमा भएपनि फेरि हकप्रदको भारी बोकाएर मर्जर गरिने नीति ल्याइन्छ भने त्यसमा जनताको साथ हुँदैन । फोर्स मर्जरमा लगेर बैकको संख्या घटाउने हो भने त्यसमा ठूला बैकहरुले अग्रसरता देखाउनु पर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने पुर्वसन्ध्यामा बिग मर्जरको चर्चा चलेपछि वित्तिय बजारमा चासो हुनु स्वभाविकै हो । बिग मर्जरमा निजी बैंकहरुलाई मात्र दवाव दिइन्छ या सरकारी बैंकहरु पनि सामेल गरिन्छ ? बहस यसमा पनि हुनुपर्छ ।
नेपालका बाणिज्य बैंकको चुक्तापूँजी ३४ अर्व आवश्यक छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अर्थमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मर्जर बारेका केही शव्द घुसाउने छन् या छैनन् । त्यो प्रतिक्षाको बिषय छ ।
बैंकहरुले धितो लिलामी प्रक्रिया किन पारे तीब्र ?
खोलौं बैंक खाता अभियान २०७६ : बैंकहरुका अनेक योजना, छुट सहित अफरै अफर
सात सय तीन स्थानीय तहमा बैंक, चैत मसान्तभित्र थप ३० तहमा पुग्ने
देशभरका सबै शाखाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
बाणिज्य बैंक बिदेशी लगानीकर्ताको एजेण्ट बस्न सक्ने
बैंकहरुको सुरक्षा दिन सरकार सक्षम, ढुक्क भएर शाखा विस्तार गर्नुस् : अर्थमन्त्री